काठमाण्डू उपत्यकामा रात्रिबस चलाउन सम्भव छ कि छैन - BBC News नेपाली
काठमाण्डू उपत्यकामा रात्रिबस चलाउन सम्भव छ कि छैन
Image caption राति सार्वजनिक यातायातका साधन नपाउँदा यात्रुहरूले दु:ख पाउने गरेका छन्
सरकारले काठमाण्डू उपत्यकाका प्रमुख स्थानमा राति पनि सार्वजनिक यातायात चलाउने आफ्नो निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नहुने सूचना निकालेपछि त्यस्तो सेवा सञ्चालन होला कि नहोला भनेर प्रश्न उठेको छ।
असार १ गते देखि लागु हुने भनिएको रात्रिकालीन यातायातका लागि १४ वटा रूटमा तोकिएको थियो। सेवा सञ्चालनका लागि १४ वटा कम्पनी तयार पनि भएका थिए।
तर भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको यातायात व्यवस्था विभागले एउटा विज्ञप्ति प्रकाशित गर्दै "थप अध्ययन गरी ठोस निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने आवश्यकता महसुस भएकाले" भन्दै पहिलाको निर्णय लागु नहुने बताएको छ।
व्यवसायीहरूसँग अन्तिम समयमा आएर भाडाबारे कुरा नमिलेपछि योजना कार्यान्वयन हुन नसकेको बताइन्छ।
सार्वजनिक यातायातमा साउनबाटै स्मार्ट कार्ड सुरु गर्न चुनौती
यसअघि पनि निकै ठूलो प्रचार गरेर रात्रिकालीन यातायात थालिएको थियो।
काठमाण्डू महानगरपालिकाले दिएको ४५ लाख रुपैयाँ अनुदानमा सञ्चालित रात्रिबस सेवा पनि लामो समय चल्न सकेन। यात्रु नपाइएकाले घाटा भएको भन्दै व्यवसायीहरूले रात्रिबस चलाउन बन्द गरेका थिए।
देशको सङ्घीय राजधानी भए पनि रात पर्नासाथ सहर सुनसान हुने व्यवसायीहरूको दाबी छ भने यात्रुहरू भने ठूला सवारीसाधन नपाइने हुँदा आफूहरू ट्याक्सी चढ्न वा हिँड्न बाध्य हुने गुनासो गर्छन्।
सरकारी अधिकारी र विज्ञहरू भने सेवामा निरन्तरता भए त्यस्तो समस्या स्वत: हराउने बताउँछन्।
किन मिलेन कुरो?
कलङ्की-धुलिखेलसहित उपत्यकाका १४ वटा प्रमुख रूटमा कम्तीमा राति १० बजेसम्म बस चलाउने सर्तसहित १४ वटा कम्पनीले सेवा सञ्चालनको अनुमति लिएका थिए।
तर सार्वजनिक सवारीसाधनको भाडा बढाउने अर्को निर्णयबाट रात्रिकालीन सेवाको योजना प्रभावित भएको विभागका महानिर्देशक कुमारप्रसाद दाहालले बीबीसी नेपाली सेवालाई बताए।
सञ्चालन रोक्ने चेतावनी दिएको सरकार फेरि किन लचिलो?
"दिउँसोको समयभन्दा डेढगुना भाडा बढाए सेवा दिन सक्ने व्यवसायीहरूले बताएका थिए। राति अन्य सवारीसाधनभन्दा सस्तो पर्ने हुँदा हामीले पनि सहमति जनाएका थियौँ।"
उनका अनुसार सार्वजनिक सवारीसाधनको भाडा बढाउने विषय विवादित भएपछि रात्रिकालीन बसको योजना अगाडि बढ्न सकेन।
उनी भन्छन्, "तर हामी यो सेवा सुरु गर्ने पक्षमा छौँ। केही समयमा योजना सार्वजनिक हुनेछ।"
कति सम्भव छ?
Image caption साँझ परेपछि कम सवारीसाधन पाइने हुँदा यात्रुहरू झुन्डिएरै जोखिमपूर्ण यात्रा गर्न बाध्य हुन्छन्
रात्रिबस सेवा पटकपटक बन्द भए पनि समग्र यातायात प्रणालीमा सुधार गर्ने हो भने समस्या नहुने बताउँछन् ट्राफिक इन्जिनियर आशिष गजुरेल।
रातको समयमा यात्रु नपाइनेभन्दा पनि व्यवस्थित प्रणाली नभएकाले समस्या उत्पन्न हुने गरेको उनको बुझाइ छ।
"विकसित मुलुकमा समेत राति सार्वजनिक सवारीसाधनमा भिडभाड हुँदैन। त्यसैले सरकारले ध्यान दिनुपर्ने कुरा भनेको निश्चित पद्धतिको निर्माणमा हो," गजुरेलले भने।
राति सवारीसाधन चलाउन सरकारले आर्थिक पक्ष र सुरक्षाको चाँजोपजोमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ छ।
उनका अनुसार त्यसबाहेक टिकट, सवारी रूट र बस आउनेजाने समयजस्ता कुरामा विशेष ध्यान दिइनुपर्छ।
"काठमाण्डूमा ८ बजेपछि यात्रु घट्ने कारण नै सार्वजनिक यातायात नपाइनाले हो। ट्याक्सी महँगो पर्ने र सार्वजनिक सवारीसाधन नपाइने भएकाले मानिसहरूलाई समयमै घर वा काममा जाने बानी परेको छ जुन रात्रिकालीन सेवामा चल्न सके आफै फेरिँदै जानेछ," गजुरेलले भने।
सरकारले चौबीसै घण्टा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालन गर्ने र आगामी वर्ष नेपाल भ्रमण वर्ष मनाउने योजना सार्वजनिक गरेको अवस्थामा केही समय अनुदान तथा अन्य सुविधा दिएरै भए पनि रात्रिकालीन सेवा चलाउनु पर्ने सुझाव विज्ञहरूको छ।
तस्वीर कपीराइट Sajha Yatayat/Google
Image caption साझा यातायातले पनि तीनवटा रूटमा रात्रिबस चलाउने अनुमति पाएको थियो
सवारीसाधन सञ्चालनमा घाटा बेहोर्नु परे पनि समग्र अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने हुँदा रात्रिसेवा अगाडि बढाउनुपर्ने उनीहरू बताउँछन्।
विगतमा जस्तो सेवा बन्द गर्नु नपरोस् भनेर आफूहरूले प्रविधिको सहारा लिने र प्रभावकारी ढङ्गबाट अनुगमन गर्नेगरी काम अघि बढाएको दाहाल बताउँछन्।
यात्रुहरूलाई बसको अवस्थाबारे थाहा दिनका लागि एपसमेत बनाइएको उनको भनाइ छ।
"रातको बेला यात्रु अल्मलिनु नपरोस् भनेर हामीले एप बनाएका छौँ जसले रात्रिबसबारे विभिन्न सूचना दिनेछ," उनले थपे।
हाल मेरो साझा नाम गरेको एपबाट साझा यातायातका बस कहाँ गुडिरहेका छन् भनेर प्रत्यक्ष हेर्ने मिल्ने सुविधा उपलब्ध छ।
29 डिसेम्बर 2018
भिडियो सार्वजनिक यातायातमा महिला यात्रुले दैनिक भोग्ने समस्या यस्ता छन्